Le nhlangano yenkolo yokulwela wokuqala we-fetus - kwalibaleka yonke wesifazane okhulelwe. Kuyinto ngezikhathi ezinjalo indlela entsha ngokuphelele, uqala ukuba nomuzwa wokuthi isimo ngaphakathi - ephilayo, simi esixhumene nalo intambo mncane intambo. Eyokuqala ukunyakaza fetus bayajabula futhi ukhathazekile ngesikhathi esifanayo.
Kungani ingane ezihambayo?
Umbungu uqala ukunyakaza kwakhe esibelethweni kunalokho ekuseni. Kakade ekupheleni kwesonto yesithathu yokukhulelwa, kukhona ukusikwa lokuqala imisipha yenhliziyo umbungu. Ekupheleni kwesonto lesishiyagalombili yokukhulelwa uqala ukwakha isimiso sezinzwa ingane. Eqinisweni, kusukela ngaleso sikhathi, futhi kukhona kuqala motor ingqondo. Ukuze iqiniso, ukunyakaza wokuqala we-fetus ayikwazi ngokuthi i bayazi futhi esihlelwe. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu umbungu namanje mincane uma iqhathaniswa ubukhulu ulwelwesi, ngakho-embryo nhlobo elintantayo kwi-amniotic fluid kanye asikwazi ukuba ku umthelela odongeni lesizalo, okungase ukuzwa owesifazane okhulelwe.
Impilo yayo yonke inhlobo yaqaphela kule nhlangano. Lapho izidalwa eziphilayo ezihambayo, kusho ukuthi sibangelwa. Ngokuba ukuthuthukiswa ndoda omncane esiswini sikamama sidinga ukudla hhayi kuphela, kodwa futhi ezihlukahlukene ezenzeka. Ngokwesibonelo, lapho owesifazane olele emuva kwakhe, lezitsha zalo ezinkulu igazi ziya onomfutho kwesibeletho esindayo, okubangela nokuncipha ukugeleza kwegazi futhi yingakho-mpilo. ukuphendula kwengane encishisiwe umoya-mpilo umncane - ezinyakazayo asebenzayo kunomphumela ukuwabhulasha ku-placenta. Njengoba i-fetus ikhula ngaphakathi kwesibeletho, umphumela onjalo uba obonakalayo esengeziwe emtholile lona wesifazane okhulelwe. Futhi manje sekufika isikhathi lapho ingane inyakaza okukhulu ingane ngaphakathi kwesibeletho iphoqa abesifazane ukushintsha isikhundla umzimba, efulathela ohlangothini lwakhe. He is ngisesemncani khulu, ingane, kodwa kuqala ukuze ukhombe umama ukuthi okwakumele akwenze, ukuthi wayephila ngokunethezeka.
Uma owesifazane uqala ukuqaphela inyakaza wokuqala we-fetus?
Ngakho, sathola ukuthi ingane inyakaza umbungu kwenzeke ekupheleni kwesonto lesishiyagalombili yokukhulelwa. Ngemva kwesonto lwesishiyagalolunye embryo ithoma ukugwinya amniotic fluid, ngemva kwesonto yeshumi - ikhula usayizi ikghone ukushintsha trajectory ezinyakazayo, kusukela ezindongeni kwesibeletho. Ngemva eminye amasonto amabili noma amathathu ingane isivele licindezele Cams akwazi ukuzwa ubuso bakhe. On the ngesonto 16 th yokukhulelwa, kuthathela zisuse imisindo. Futhi okokuqala, ukushintsha ithoni e izwi kanina.
Futhi lapho Umama uqala ukuzwa yonke amasignali ingane yakho? imigomo Uniform ngoba wonke, ngaphandle kokukhetha, azikho omama. Omunye kungaba kuphela uqaphele lo mkhuba jikelele isilinganiso ngenhla. Kukholakala ukuthi ukunyakaza kuqala fetus abesifazane nulliparous sebeqala ukubona, kusukela ngesonto lama-20 owesifazane ekhulelwe. Abesifazane abakhipha zingamitha - ne 18 th ngesonto. Nokho, abanye omama ikakhulukazi ebucayi bathoma ukukhumbula ukunyakaza kuqala fetus, kusukela kwamasonto angu-16 okukhulelwa. Nokho, lokhu kwenzeka kuphela abesifazane, ukhulelwa lesithathu noma esingaphezu kwesisodwa.
Abantu abaningi buza ukuthi kunjani ibangele wosana? Nalapha futhi, lezi emizweni ngamunye wesifazane uthatha, sokuboshwa okwamehlela, noma ukungabi yalo, - kube sezingeni nemicabango yabo. Kwesinye isikhathi ukunyakaza kuqala ngaphakathi esibelethweni owesifazane ingane okuchazwe njengoba tickling amaphiko inundu noma ukusaphazela zezinhlanzi e aquarium. Kodwa impela eningi abesifazane abakhulelwe kuze kube muva nje benqaba ukwamukela ukunyakaza kuqala fetus, kokubalula imizwa yakhe ngezithukuthuku igesi ukunyakaza peristalsis.
kanzima kanjani ingane kungenzeka uthuthe? Indlela ukuqaphela "ulimi" ukunyakaza kwakhe fetus?
ukunyakaza kwengane - lena ulimi ingane ngesikhathi zisesesibelethweni, waxoxa naye ngaso. Lalela bese uzama ukuqonda ukuthi kungani umntwana ihamba ngale ndlela hhayi ngenye indlela, kubaluleke kakhulu ngoba umama. Akukhona njalo umsebenzi kid ngesihluku kuwuphawu ukuthi awunazo-mpilo noma nezinye izinto ezibalulekile. Cishe ingane nje ungakhululekile ukuba isikhundla ukuthi waphoqwa ukuboleka, ngiyabonga kunina. Worth ushintsho isikhundla umzimba futhi ingane uthulisa phansi ngokushesha. Uma ukuhamba ingane akuyona kabuhlungu owesifazane okhulelweyo, kuyisibonakaliso ecacile esimweni esejwayelekile ingane yakhe.
Sivamile-fetus kubhekwa perturbations 10-15 ngehora, ukuqala at Emasontweni onke okukhulelwa 24. Nokho, umntwana angase ahlale lapho esephumule amahora amathathu ngesikhathi esisodwa. Ungakhathazeki ngakho - ke elele nje. Worth ukukhathazeka uma wiggling ingane wazizwa amahora kungekho kuka-12. Kulokhu, owesifazane okhulelwe akufanele banqikaze xhumana nodokotela wakho. Isizathu unqamule engahlelelwe kuya wezifo zabesifazane-OB zingase futhi zibe ukunyakaza ngokweqile esebenzayo noma fetus evilaphayo kakhulu izinsuku ezithile zilandelana. Noma ngabe yini eyenziwa ushintsho perturbations kungase isibonakaliso sokuthi kukhona abanye enkingeni nengane.
Kunoma yikuphi, ngemva kokufunda ukuqonda ulimi umntwana ukunyakaza, umama othile wawuyoba amanxiwa kalula ukunquma izidingo bakhe ngemva kokuzalwa kwakhe.
Electrophoresis "Karipazimom" hernia: ukubuyekezwa, Izimo, amasu